Kanadha - ALinks
kufamba, kugara, kushanda, kudzidza kuCanada
Dai 2, 2022 Demi Kanadha, zvinhu zvekuita
Canada inyika iri kuchamhembe kweNorth America. Matunhu ayo gumi nenzvimbo nhatu dzinotenderera kubva kuAtlantic kuenda kuPacific uye kuchamhembe kuenda kuArctic Ocean, inofukidza mamirioni mazana mapfumbamwe emamirimita (9.98 miriyoni mativi emakiromita), ichigadzira
Nzira yekuwana sei vhiza yeCanada yePakistani?
April 18, 2022 Demi Kanadha, visa
Kune vashanyi vePakistani, Canada ine mukurumbira, uye inogara yakavhurika kune vashanyi vayo. Nekuda kweiyo nyore vhiza uye mitemo yekubvakacha, maPakistani anoda kushanya kana kugara muCanada. Uye kana ukashanyira Canada muna 2020 uye kutarisira kugamuchira
Maitiro ekunyorera vhiza kuCanada?
April 18, 2022 Shubham Sharma Kanadha, visa
Vanhu vekuAmerica, vekuMexico, nevamwe vanhu vanobva kunyika dzakawanda dzine mari yakawanda (ona runyoro rwuri pasi apa) havadi vhiza rekushanyira Canada; pachinzvimbo, ivo vanofanirwa kuwana Electronic Travel Authorization (eTA) inogona kuwanikwa online. Vamwe vese vachada visa
Nzira yekuwana sei imba muCanada?
March 30, 2022 Demi Kanadha, dzimba
Unogona kuwana imba mumapepanhau eko, mumapoka eFacebook, kana pamawebhusaiti. Unogona kutanga neRealtor.ca kana Kijiji. Kana kuti tora rubatsiro rwemumiriri chaiye wepanzvimbo anogona kubhadharisa imwe komisheni asi achikubatsira
Nzira yekuwana sei basa muCanada? Gwaro rinokurumidza kumunhu wese, vatorwa uye vekuCanada
March 18, 2022 Demi Kanadha, mabasa
Wese munhu anoda kuwana basa muCanada anofanira kutanga awana basa muCanada. Chokwadi Canada, Glassdoor Canada, kana Kijiji ese masaiti kwaunogona kuwana mabasa. Ona zvimwe pazasi Unogona kutsvaga masangano ekutsvaga basa
Nzira yekuwana sei basa muCalgary? Gwaro rinokurumidza kumunhu wese, vatorwa uye vekuCanada
March 17, 2022 Demi Calgary, mabasa
Wese munhu anoda kuwana basa muCalgary anoda kutanga awana basa muCalgary. Kutanga kwakanaka kunogona kuve webhusaiti yebasa seChokwadi Canada muCalgary, Alberta nzvimbo yebasa, kana Kijiji muCalgary. Unogona
Anobatsira maoneti eCanada: ruzivo, maforamu uye magwara
February 3, 2022 Demi Kanadha, zvinoshanda zvinobatsira
Urwu ndidzo runyorwa rweanobatsira ma link kune vanhu vanogara muCanada kana kufamba famba neCanada Izvi zvinongedzo zvinogona kubatsira kuti unzwisise kuti kodzero dzako ndedzipi muCanada. Zvinenge zvese izvi zvinyorwa zviri pamutemo. Ivo vari mukati
Ungawana sei vhiza yemudzidzi yeCanada?
January 17, 2022 Demi Kanadha, kudzidza, visa
Kuti udzidze muCanada, iwe uchafanirwa kunyorera yeCanada mvumo yekudzidza, iyo inoshanda sevadzidzi vhiza kwenguva yekugara kwako. Kana kosi yako kana chirongwa chiri mwedzi mitanhatu kana ipfupi, haudi iyo
Nzira yekunyorera sei yunivhesiti muCanada?
January 14, 2022 Demi Kanadha, kudzidza
Kudzidzira muCanada inzvimbo yakanaka kune vadzidzi vanoda kudzidza kunze kwenyika. Mayunivhesiti, makoreji, zvikoro zvehunyanzvi, zvehunyanzvi, uye masangano esainzi anopa sarudzo dzakakura dzekufunda. Kuti tishandise mune chero yeaya nzizi tinoda kuziva maitiro ekuti sei